I-intanethi ye-intanethi ye-Models.com yakhetha amamodeli angcono kakhulu ka-2014
Unyaka wonke i-portels.com yenethiwekhi eyaziwa kakhulu ithatha umncintiswano womklomelo we-Industry Industry Award. Ijaji eligunyazayo labantu abangaphansi kuka-250 linquma izindlela ezinhle kakhulu ezinhlokweni eziningana. Kulo nyaka, iphaneli labahluleli libandakanya ochwepheshe abaziwa kakhulu emhlabeni wezemibukiso njengomthwebuli wezithombe uMariano Vivanco, uMqondisi wezobuciko uDesel Nicola Formichetti, umlingisi wezincwadi uCathy Grand. Ngaphezu kwalokho, labo abaqashisayo bakhethwa ngabathandi bezithombe ezilula abavela emhlabeni wonke ngokuvota kusayithi.
Imodeli engcono kunazo zonke phakathi kobulili obuhle yabizwa ngokuthi u-Eddie Campbell, futhi lezi zithombe zahlukunyezwa nguClement Scaburno. Futhi, isibonelo esihle sokuqala, i-Rising Star, sinqunywe. Waba u-Anna Ivers. Isihloko esithi "Ukubuya Konyaka" sinikezwe uGemma Ward. Okuthandwa kakhulu kumanethiwekhi omphakathi kuqaphele uCaru Delevin, phakathi kwezinkanyezi ezenza njengesibonelo, kuphawula uTilda Swinton.
Isigwebo sejaji lomphakathi sihambisana nombono ochwepheshe bezobuchwepheshe kuphela ekuphakanyisweni "Ukubuyiswa Konyaka" nethi "I-Model of Social Media" - uGemma Ward noKaru Delevin babike kokubili. Ijaji lokugcina le-amateur laphinde labizwa ngokuthi imodeli engcono kakhulu yonyaka. Phakathi kwamadoda okunqoba abanikezwa uShaun O'Prey uDavid Gandhi (indawo ye-I no-II). "Izinkanyezi eziPhakamisa amehlo" zabizwa ngokuthi uKendall Jenner noGigi Hadid (I no-II indawo ngokulandelana). Lokhu akuzona zonke iziphakamiso kanye nabanqobile - uhlu oluphelele lwazo lungabonakala ku-Portels.com ye-portal.
Izitayela zezimfashini ezithombeni. Isizini: Autumn-Winter 2012-2013
I-Yanastasia inkanyezi yenkanyezi ku-Moscow Fashion Week
EBonn u-Karl Lagerfeld uqala ukubuyela emuva
Isithende esiphezulu sithini?
U-Anthony Vaccarrello uzoletha iqoqo lakhe lokuqala leVerus Versace eLondon
Ukuthenga izicathulo zokuqala ezinganeni
Ukulungiswa kwekhaya: Ikhaya: izigaba ezinhlanu zokudongeka okufanele
Ungasusa kanjani umuzwa wesikhwele njalo?
Indoda ephelele ngamehlo owesifazane
I-horoscope ngqo yeviki kaNovemba 6-12 kuzo zonke izimpawu zodiacac
Ingxenye yomlingo kuwo wonke owesifazane
Izakhiwo zokwelashwa nezomlingo we-opal